Qaramada Midoobey oo sheegtay in saddex goobood oo kale oo Soomaaliya ah macaluuli ka dillaacday. – Radio Daljir
Newyork, Aug 04 – Qaramada Midoobey ayaa ku dhawaaqday in saddex meelood oo dheeraad ah oo kamid ah koonfurta Somali ayna ka dillaaceen xaalado macaluuleed oo aad u khatar, siina kordhinaysa masiibada bani?aadanimo eek a jirta Soomaaliya.
Isku-dubaradiha gargaarka ee Soomaalia Mark ayaa sheegay in Afgooye, xeryha dadka gudaha ku barakacay ee IDP-ga ee todobo degmo oo Banaadir kamid ahi iyo gobolka Sh/dhexe-ba ay ka jirto macaluuleed.
Qaramada Midoobey ayaa bishii hore ku dhawaaqday in ay macaluul baahsani ka jirto gobollada shabeellada hoose iyo Bakool oo ka wada tirsan koonfurta Soomaaliya.
Xafiiska Qaramada Midoobey ee isku-xirka arrimaha gargaarka ee (OCHA) ayaa codsi kaalmo ah u jeediyey beesha caalamka si looga jawaabo masiibada bani?aadantinimo ee ka jirta Geeska Africa oo ay kamid yihiin dalalka Somalia, Ethiopia, Kenya iyo Djibouti, iyadoo 44% codsigaasi laga soo jawaabay, waxana intaa dheer in gargaar ay ku deeqday hay?adda Maraykanka ugu qaabilsan gargaarka dibadda ee USAID oo dhammaa 1.4 billion aan isaga baahiyihiisa weli la daboolin.
12.4 million oo ruux oo ku nool Geeska Africa ayaa gargaar u baahan sida uu sheegay Xafiiska QM ee isku-xirka arrimaha gargaarka ee (OCHA), waxana xafiisku intaa ku dartay in 11 million oo qof oo ku nool Geeska Africa ay si toos ah u saamaysay abaarta ka taagan Geeska oo la sheegay in ay taahy tii ugu xumayd muddo 60 sano ah.
xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo ah kuwa ugu weyn caalamka ayaa dadka ku jira dhaafeen 380,000, waxana bishii ugu dambeysay ku biiray 40,000 ruux oo ka yimid gudaha dalka Somalia oo keliya, iyadoo hay?adda Qaramada Midoobey ugu qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ka digayso nafaqa-darro ba?an oo ka jirta xeryahaasi qaxootiga.
UNCHR, ayaa sheegay in ay xerada Dhadhaab u duulisay kumanaan teendhooyin ah iyadoo xustay in 45,000 teendho weli loo baahanyahay si loola tacaalo qaxootiga daadka ah
ee kasoo burqanaya dalka Somalia, UNCHR ayaa sidoo kale qaylo-dhaan kasoo saartay biyaha xerada Dhadhaab oo la sheegay in ay gabaabsi noqon-karaan.
Ergeyga xoghayaha guud ee QM ugu qaabilsan Somalia ayaa sheegay in dagaallada ka jira Somalia ay yihiin qodob ama cunsur muhiim ah oo dhibaatada uga sii daraya, waxana uu sheegay in loo bahanayahay in gargaarka la gaarsiiyo meelaha ay dhibataadu aafaysay, iyadoo aan dheg-jalaq loo siinayn kuwa xagjira.
Cabdirashiid Muuse Siciid,